Isitudiyo soMdaniso e-US | Vula kwaye ube neStudiyo soMdaniso
Ukuba ngumnini weFred Astaire Dance Studios Franchise
Molweni baThathi beKamva,
Kuyasivuyisa ukwabelana ngeenkcukacha malunga nelinye lawona mathuba amnandi kwaye anomvuzo e-United States nakwihlabathi liphela-sibambisene neqela likaFred Astaire Dance Studios!
Ukusukela nge1947, xa uMnu Fred Astaire waseka inkampani yethu, uFred Astaire Dance Studios waba ligama eliyimpumelelo kwihlabathi liphela, elichongwe ngokugqwesa komdaniso. Umnumzana Astaire ngokwakhe ubenegalelo ekwenzeni ikharityhulamu yomdaniso webhola ekhethekileyo kunye nendlela yokufundisa, ukuqinisekisa ukuba iindlela zakhe zokudanisa ziya kugcinwa kwaye zidluliselwe eluntwini. Sisebenzisa ezi nkqubo zingenakulinganiswa zoqeqesho kunye nezatifikethi, injongo yethu ibisoloko ikwabelana ngovuyo lomdaniso wobomi bonke njengesixhobo sokukhuthaza, ukuvuselela nokuxhobisa abafundi bethu, abafundisi, abasebenzi kunye noluntu!
Namhlanje, inkqubo yethu yomdaniso wesitudiyo ihlala ikhula, inezitudiyo ezingaphezu kwe-180 kwizixeko ezikuMntla Melika nakwihlabathi liphela. UFred Astaire Dance Studios uyaqhubeka nokugcina imigangatho ephezulu yokugqwesa ngokusebenzisa ikharityhulam ye-FADS kunye neFred Astaire Dance Board yethu.
Sihlala sixhasa impumelelo kunye nokukhula kwamaFranchisees, ngeendlela ezininzi ezibalulekileyo:
Okokuqala, sizibophelele ekusebenzisaneni nabantu abafanelekileyo. Samkela iintlobo ngeentlobo zeeprofayili zomnini welungelo lokungena kwiinethiwekhi zethu - abadanisi kunye nabahlohli, abanini be studio abazimeleyo, kunye nabantu abashishini ngokubanzi. Inkqubo yethu yokugaya, ukuvavanya kunye noqeqesho inceda ekuqinisekiseni ukukhula, ukuphumelela kwefrankise enabanini be studio ngomsebenzi kunye nenkuthazo eyimfuneko ekwenzeni ixesha elide, ishishini eliyimpumelelo.
Okwesibini, sinika umninimzi ngamnye weFred Astaire Dance Studio izixhobo, uqeqesho kunye nenkxaso eqhubekayo abayifunayo, ukwenza ishishini eliyimpumelelo lokurhweba. Le nkxaso, idibene nomoya wakho, ukugxila kunye nokuzimisela kunokukumisela kwikhosi yezona zinto zinomdla nezonwabisayo ebomini bakho!
Ukuba yinxalenye yeFred Astaire Dance Studios lithuba elihle kuye nabani na ofuna ukuphucula umvuzo wabo ngelixa ephucula ubomi ngovuyo lokudanisa ubomi bakho bonke. Nxibelelana nathi namhlanje ukuthatha inyathelo lakho lokuqala kwikamva elikhuselekileyo nelinomvuzo.
Enkosi ngomdla wakho-sijonge phambili ukuva kuwe!
COFA APHA yokukhutshelwa kwe
"UFred Astaire Dance Studios Franchising"
UMongameli kunye ne-CEO
UFred Astaire Dance Studios
Esi ayisosithembiso sokuthengisa i-franchise. I-franchise kaFred Astaire Dance Studios inikezelwa kuphela ngokuhanjiswa kwethu koXwebhu lweFranchise Disclosure uxwebhu kuwe ngokuthobela i-FTC Rule 436 kunye nemithetho eyahlukeneyo yokuthengisa i-franchise yelizwe.
Olu lwazi lwewebhusayithi alujoliswanga kuye nawuphina umntu kula mazwe adweliswe ngentla apha okanye egameni lomthengisi okanye nabani na osebenza ngolwazi lomthengisi. Akukho franchise inokubonelelwa okanye ithengiswe kula mazwe adweliswe apha ngentla kude kube kugunyaziswe ukunikezelwa kwelungelo lokuthengisa ngokusemthethweni ligunya elifanelekileyo lolawulo, kwaye uxwebhu lweFranchise Disclosure luxwebhu luhanjisiwe njengoko kufunwa ngumthetho ofanelekileyo.